गरे हुन्छ, नपत्याए हेनुहोस्(फोटो फिचर) - प्रशासन प्रशासन
गरे हुन्छ, नपत्याए हेनुहोस्(फोटो फिचर)
काठमाडौँ । गरे के हुँदैन र ? यदि तपाइसँग दृढ इच्छाशक्ति छ भने कुनै पनि काम गर्नबाट कसैले रोक्दैन ।
न बजेट, न त वार्षिक कार्य योजनामा नै राखिएको छ तर पनि गर्नै पर्छ भनेर लागेपछि सिंहदरवारभित्रको बन्जड भूमि यति बेला बगैँचामा परिणत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्त्ता विनोद बहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा गठित ‘सिंहदरवार परिसर अनुगमन समिति’ को संयोजनमा सिंहदरवारमा सञ्चालित वृहत् सरसफाइ अभियान पछि सिंहदरवार परिसर सफा, हरियाली र व्यवस्थित बन्दै गएको हो ।
निरन्तर दुई महिनासम्म बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी १० बजेसम्म खटेको समितिका सदस्यहरूले सिंहदरवार परिसरमा कार्यरत सेना, प्रहरी, सशस्त्र तथा मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूबाट जताततै थन्क्याएर राखेका करोडौँ मूल्यका सवारी साधन व्यवस्थापन मात्रै गरेन कि ट्याङकरबाट कार्यालयसमेत पखाल्ने काम गर्‍यो ।
देशका मन्त्री सचिव बस्ने मन्त्रालयहरूबाट पाथीका पाथी धुलो-मैलो पखालियो । मन्त्रालय टल्काउने कामसँगै मनलाग्दी थुपारेका सयौँ पिप्पर फोहोर उठाइयो ।
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको ‘सदुपयोगको सिद्धान्त’ अनुसार झार, झाडी र अनावश्यक भग्नावशेषले ओगटेको जमिनलाई डोजरले सम्याउँदै बगैँचा बनाइयो र फलफुलका बिरुवाहरू रोपियो । निरन्तरको स्याहार सुसारपछि यति बेला फलफुलका बिरुवा फुल्न थालेका छन् ।
गृह मन्त्रालय पछाडिको यो ठाउँ हेर्नुहोस् त ?
अनि शिक्षा मन्त्रालय र महिला विकास मन्त्रालयको बिच भागमा रहेको यो ठाउँ पनि हेर्नुहोस् त ।
यी त केही प्रतिनिधि स्थानहरुमात्रै हुन् जसले गरे हुन्छ भन्ने सन्देश मात्रै दिएका छैनन् ‘देखाउनै लागि’ गरियो भन्नेलाईसमेत ‘गर्नकै लागि’ हो भन्ने जवाफसमेत दिएका छन् ।
एक व्यक्ति एक फलफुलको बोट अभियान अन्तर्गत देशभर लाखौँ बोटबिरुवाहरू रोपिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा देशभर रोपिएका २८ लाख बढी बिरुवामध्ये त्यसको आधा मात्रै जोगाउन सक्ने हो र हरेक वर्ष अभियानलाई निरन्तरता दिने हो भने फलफुलै फलफुलको देश बनाउन धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन ।
Tags : सरसफाइ सिंहदरवार सिंहदरवार परिसर अनुगमन समिति